#CrimeStats: ITheku lihamba phambili ngokudunwa kwezimoto
Isithombe esigciniwe: Gcina Ndwalane
LEE RONDGANGER | September 12, 2019
ISITESHI samaphoyisa iDurban Central, esibhekelela izindawo ezimaphakathi nedolobha iTheku, iDurban beachfront nezindawo eziseMorningside sihamba phambili ngokubikwa kwamacala okudunwa kwezimoto nezithuthuthu eNingizimu Afrika.
Izibalo zobugebengu ezikhishwe ngoLwesine zikhombisa ukuthi amacala okudunwa kwezimoto nezithuthuthu abikwe esiteshini iDurban Central anyuke ngo-19%. Ukudunwa kwezimoto nezithuthuthu kusuke ku-622 ngonyaka ka-2017/18 kwanyukela ku-666 ngo-2019/19.
Iziteshi zamaphoyisa eziseThekwini, iBerea noMbilo zifakwe ohlwini lweziteshi ezinhlanu ezihamba phambili ngokubikwa kwamacala okudunwa kwezimoto nezithuthuthu eNingizimu Africa. IBerea ehleli kwinombolo yesine, inyukelwe ukubikwa kwamacala okudunwa kwezimoto nezithuthuthu esuka ku-551 agxumela ku-591. Anyukele ku-540 amacala okudunwa kwezimoto nezithuthuthu esiteshini saseMbilo, esibekwe endaweni yesihlanu, njengoba kade esuka ku-497.
Isiteshi esihleli kwinombolo yesibili ngokubikwa kwamacala okudunwa kwezimoto nezithuthuthu eNingizimu Afrika kube yiHoneydew esisedolobheni iGoli. IBrooklyn, okuyisiteshi esiseGoli, sihleli endaweni yesithathu ngokubikwa kwamacala okudunwa kwezimoto nezithuthuthu.
Iziteshi zamaphoyisa ezintathu zaKwaZulu-Natal okuyiMarianhill, Umlazi noKwaMashu E zifakiwe ohlwini lweziteshi ezingu-30 ezihamba phambili ngokwebiwa kwezimoto eNingizimu Africa.
Umlaza ukleliswe endaweni yesishiyagalolunye ngokwebiwa kwezimoto njengoba zingu-147 izimoto ezidunwe khona. Izibalo zokwebiwa kwezimoto eMlaza zehle ngo-3 njengoba ngonyaka odlule kade kubikwe amacala angu-150. EMarianhill, kubikwe izimoto ezingu-134 ezitshontshiwe, kwakhuphuka ku-80 wamacala ayebikwe ngonyaka ka-2018. KwaMashu E kubikwe izimoto ezingu-129 ezitshontshiwe, okudlule u-84 owawubikwe ngonyaka ka-2018.
UNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele uthe izibalo zobugebengu eNingizimu Africa azikho zinhle.
Ukubikwa kwamacala obugebengu kwehlile kwezinye izindawo okubalwa kuzo ukubamba inkunzi ngenhloso yokulimaza, ukudunwa kwezimoto okunciphe ngo-(1,8%), nokubanjwa inkunzi kwamabhizinisi okwehle ngo-(1,3%). Ukuhlaselwa kwemoto yemali kwehle ngo-(23,1%), kwathi ukuhlasela kwamabhange kwehla ngo-(69,2%). Ukudunwa kwamaloli kwehle ngo-(1,7%) kwaphinde kwashona phansi nokuhlaselwa kwezindawo zamabhizinisi, okwehle ngo-(0,8%).